ဒေါင်းအသဲတစ်ခြမ်း ရောင်းရန်ကျန်ရှိ | MoeMaKa Burmese News & Media
တင်လတ်ကို ● တချောင်းမြင်
လေများတာ အသေစားတာ အရည်များမှန်သမျှ
မန်ကျည်းဖျော်ရည် ဇီးဖျော်ရည် စပျစ်ဖျော်ရည် တွေ့မရှောင်တာ
တောရေး တောင်ရေး အရေးမှန်သမျှ တို့အရေးသမားတွေနဲ့
လေထန်ဝေဖန်နေရရင် အနေဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲ
အသောက် မဆင်းရဲမခြင်း ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမှန်သမျှ
လားလားမှမမှု ရန်သူဟူသမျှ အမြစ်ကလှန် ချေမှုန်းမယ်ကြုံးဝါး …
ဒလိုင်း၊ ဗားကလပ်၊ မန်ဒဲလား၊ ကဒါဖီ၊ ဆဒမ်နဲ့
ရေးထားတဲ့သတင်း ရောထားတဲ့ပလင်း ပေါများတဲ့အတင်း
ပညာရှိ၊ ပညာရှင်၊ ပညာသင်ပါမကျန် သူအာတွေ့သမျှ လက်ချာရိုက် ….
ကျောင်းတုန်းက နံရံကပ်စာစောင် အောက်ဆုံးဒေါင့်ဆုံးနားကတောင်
တခါဖူးမှ ပါဘူးတာမရှိခဲ့ပေမယ့် ကဗျာ၊ စကားပြေ၊ ကာတွန်းဓာတ်ပုံ
သူမလုပ်တာ ဘာမျှမရှိ သူတတ်သူသိ
သတင်းထောက်အလုပ်တောင် အပျင်းပြေခဏ မလုပ်ချင်ဘူးတဲ့
အွန်လိုင်း အီးမေးလ် ဘလောက်ခ်
နောက်ဆုံး ဖွဘုတ်မှာ တကုပ်ကုပ် တနေကုန် အလုပ်ရှုတ် ….
၂၀၁၂ မှာပြီးမယ့် ကမ္ဘာကြီးအကြောင်း ဥရောပငွေဈေး
မြစ်ဆုံနဲ့ တရုတ်ကြီး အရှုပ်ကြီး အကြံကြီးတဲ့ … ကန်
အတွေးခေါင်ခိုက်အောင် သူစဉ်းစားနေတုန်း …………
၂၀၁၂ မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့အပြောင်း ဝင်သူတွေဝင်ကြ ပြင်သူတွေပြင်ကြ
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကနေ သုခမြို့တော် တည်ထောင်မယ်လို့
ကြံသူကြံ မှန်သူမှန် လန်သူလန်
အမြဲတန်း ရန်သူမရှိသူတွေ ရန်ငါစည်းပြတ်သူတွေ
ကြံဖန်ပြီး ပွသူတွေ ရှိတာတွေ ရောင်းတုတ်ထားသူတွေ
ပရိုပိုဆယ် ရေးစားသူတွေ ပီအိတ်ခ်ျဒီတွေ အမ်အက်စ်စီတွေ
ဒီဗွီဒီတွေ ဗီစီဒီတွေ ခိုးကူးတွေ ဗြောင်ကူးတွေ
နာမည်ပြောင်းတဲ့သူတွေ ဖြီးဖြန်းသမားတွေ အမြီးရမ်းသွားတဲ့သူတွေ
ခေါင်းကျက် ခေါင်းစားသူတွေ ညှပ်စိတွေ တတ်သိတွေ ဗဟုတွေ
လေးလုံးတွေ သုံးလုံးတွေ နှစ်ပွင့်တွေ တစ်ပွင့်တွေ
ဘာမှမသိသူတွေ ပြည်သူတွေ ပြည်တွင်းတွေ ပြည်ပတွေ
ပေါင်းလုပ်ဖို့ သူ့မှာ ဘာမှမရှိ ငွေမရှိ ယာမရှိ လက်မှတ်မရှိ အဖွဲ့မရှိ
အမေရိကန် အင်္ဂလန်ပီပီမရှိ ရွာကလှမ်းမှာရန် မေမေ့မှာ ဘာမှမရှိ
ဖျာတစ်ချပ် စောင်တစ်ထည် ဗန်ဒါသီးတံဆိပ်ကွန်ပြူတာတစ်လုံး
ဒေါင်းအသဲတစ်ခြမ်း ရောင်းရန်ကျန်ရှိ …..။
One Response to ဒေါင်းအသဲတစ်ခြမ်း ရောင်းရန်ကျန်ရှိ
လင်းလင်း on June 19, 2012 at 9:23 am
ငတ်နေဦးပေါ့ ကဗျာဆရာရယ် ။ ဥပမာ င့ါလိုပေါ့